नेपाल विग्रनुमा सबैभन्दा ठूलो हात कर्मचारीहरुको छः सहसचिव प्रेम सञ्जेल
काठमाडौं/ नेपाल सरकार श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय विराटनगर कार्यालयका सहसचिव प्रेम सञ्जेललाई श्रम मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो । उनले आफूले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेका कारण आफूलाई सरुवा गरिएको भन्दै विराटनगरमा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले सफाइ दिएका छन् । त्यसै पत्रकार सम्मेलनमा उनले पत्रकारहरुसँग गरेको सवालजवाफको संक्षित सम्पादित साभार प्रस्तुत गरिएको छ । (भिडियो सहित)
मेरो घरमा साइकल छैन मेरो असिस्टेन्टको घरमा कार कहाँबाट आयो ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले किनिदिएको हो ? मेरो सचिव महेश दाहालले किनिदिएको हो ? त्यसको थाहा चाहियो मलाई । तिनीहरुको सम्पत्ति कहाँबाट आयो त्यसको छानविन गरेर कार्वाही गरे भइहाल्छ । त्यसको जवाफ मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माननीय श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलाई सरुवा गरी कामकाज गर्न खटाइएको भन्ने सरकारको नयाँ टर्मिनोलोजीसँग नझुक्किनुहोला । यो सरुवा हो, त्यसको जवाफ मलाई महेश दाहालले दिनुपर्छ ।
म अनुशासनको कार्वाही होइन म त जुनियरकै कार्वाही भोग्न तयार भैसकेँ, फाँसीमै चढ्न तयार छु त्यसैले मलाई सानातिना कुराले छुँदैन । नेपाल विग्रनुमा सबैभन्दा ठूलो हात कर्मचारीहरुको छ । नेताले कति फट्याइ ग¥यो नेतालाई बोलाएर सोध्नुस न । मैले पनि ४० वर्ष जागिर खाएको छु । शान्ति मन्त्रालयमा म विद्रोही सेना हेर्थें । कोही एक जना मान्छे ल्याउनुस त प्रेम सञ्जेललाई घुस खुवाएँ भनेर । कोही माइकललाल जन्मेको छ केपी ओली सहित ?
यही हप्ताको कुरा हो, रंगेली र डाइनियाका करीब ३० जना युवाहरुलाई निरन्जन पुरी भन्ने दिल्लीमा बस्ने उनीहरुकै भाषामा र गणेश गिरी भन्ने गौरीगञ्ज नगरपालिका वडा नं. चार बस्ने र दिपेन्द्र झा भन्ने गौरीगञ्ज नगरपालिका वडा नं. चार झापा बस्ने ३० जना सुनवर्सी र रंगेलीका युवाहरुलाई पाँच लाखको दरले लगेर डेढ करोड ठगी गरेको रहेछ । उनीहरुलाई मैले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छु ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ३ को साझा मार्गमा नक्कली तमोर मेवाखोला जलविद्युत आयोजना भनेर अफिस राखेर घर भाडामा लिएर साखा अधिकृत देखि पिउन सम्मका मान्छे नियुक्ति गरेर सापटी लिएको भनिएको तर त्यो सापटी लिएको होइन घुस हो । त्यो घुस लिएर घुस पनि खायो ५० जनालाई नियुक्ति पनि गर्यो तलब पनि दिएन । गुणराज ओझालाई मैले पक्राउ गरेर ल्याएर अहिले मुद्दा हालेको अवस्था छ ।
साइबोर्ड राखेर ठगी भइराखेको छ नेपालमा । यस्ता ठगीका मामिला पनि मेरो सरुवाका कारण हुन सक्छन् । सबैभन्दा गतिलो कारण भनेको बैदेशिक श्रम स्वीकृति यहाँबाट आउँदैछ र त्यसमा घुस खाँन पाइदैन भनेर मलाई खेदेको हो । र म त्यसै जानेवाला पनि छैन । यस्ता बडा बडा माननीय ताननीय जोडिएकाहरुको उद्योग फ्याक्ट्री निरीक्षण गरेर रिपोर्ट पनि दिइएको छ । अब आउने महिनामा त्यो रिपोटी कार्यान्वयन भएन भने कानुनी कार्वाही हुन्छ भनेर पनि प्रतिवद्धता गरेको छ ।
अदालत जाने मात्र होइन म ज्यान छोड्न तयार छु अदालत धेरै नजिकको कुरा हो । यी सबै कुराहरुको क्युमुलेटिभ असर मेरो सरुवा हो । सबै मिलेर खाने अनि त्यसको विरुद्ध लड्दा चाहिँ श्रम मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरु आँट्दैनन् ?
मैले तपाईको के पैसा बाँकी छ भनेर सोधेको घरको पैसा हो, यो घर म हुँदा बनाएको हो ? होइन । मैले तपाईलाई पैसा दिएको हो ? होइन । मैले तपाईको ऋण खाएको छ ? छैन । अनि मैले के को पैसा दिने त भन्दा यो घरको पैसा दिने भनेपछि मलाई घुस दिन आउनुभएको थियो । म सँग हिडन क्यामेरा छ, मैले अहिले बोकेको छैन आउट हुन्छ भनेर । कलम जस्तो छ, माथि बल्छ भित्र पेन ड्राइभ छ । मैले त्यो रेकर्ड गरेर राखिराखेको थिएँ । डेढ घन्टा जति दलाली गरेर बस्नुभयो । मैले पेनड्राइभ ल्यापटपमा हालेर देखाइदिएँ । भोलि २६ ओटा टेलिभिजनमा बजाइदिन्छु आज मैले माफ गरे जानुस ।
भ्रष्टाचार विरोधी कर्मचारी धेरै छन् नि तर यसरी बोल्न पो सक्दैनन् । म मात्र होइन नि धेरै संख्यामा छन् । अगाडि आयो भने यसरी मलाई जसरी दुःख दिन्छन् । त्यो प्रेम सञ्जेललाई किन जिब्रो चिलाको ।